नेयमार विश्व कीर्तिमानी रकममा पिएसजी जान सक्ने ! | Hamro Khelkud
नेयमार विश्व कीर्तिमानी रकममा पिएसजी जान सक्ने !
पेरिस (एन्जेसी)– बार्सिलोना छाडेर विश्व कीर्तिमानी रकम १ सय ९० मिलियन पाउन्डमा नेयमार फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) जाने सम्भावना बढेको बताइएको छ । ब्राजिलियन स्टार नेयमारले संसारकै सबैभन्दा महंगो खेलाडी बन्ने लिग १ टोलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको र केही दिनमा उनको सरुवाका विषयमा टुंगो लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२५ वर्षे सान्तोषका पूर्व खेलाडी लामो सम्झौताका साथ पिएसजी पुग्ने र त्यसले फुटबलमा उनको अलग छवि स्थापित हुन सक्ने अड्कल पनि काटिएको छ । च्याम्पियन्स लिगसहित घरेलु लिग उपाधिको सम्भावनालाई बलियो बनाउन पिएसजी चर्को मुल्य तिरेर पनि नेयमारलाई भित्राउन प्रयारत रहेको बताइएको छ । छ पटकको लिग १ च्याम्पियनपन पिएसजी गत बर्ष विजेता मोनाको भन्दा ८ अंकले पछाडी परेको थियो ।
पछिल्ला बर्षहरुमा नेयमारले बार्सिलोनामा मुख्यतः लियोनल मेस्सीको छायाँ खासै प्रभाव पार्न नसकेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । बार्सिलोनाका उपाध्यक्ष जोर्डी मेस्ट्रेले नयमार बार्सिलोनामै रहने विश्वास व्यक्त गरेको केही घन्टामै उनी पिएसजी जान्ने सम्भावना बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
‘नेयमारले क्लब छाड्ने छैनन् भन्नेमा म २ सय प्रतिशत विश्वस्त छु’ बार्सिलोनाका उपाध्यक्ष मेस्ट्रले भनेका छन्, ‘मैले आज बिहानमात्र पढे पिएसजीले उनलाई लाने विषय पुरै अस्वीकार गरेको छ । हाम्रो दुई क्लबकाबीचमा सम्बन्धमा परिवर्तन आउने कुनै कारण छैन । ’
यद्दपी विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी मध्येका एक नेयमार बार्सिलोनामा रहँदा सम्म मेस्सीको छायाँबाट मुक्त हुन नसक्ने विश्वास गरिदै आएको छ । नेयमारका सल्लाहकारले मेस्सीसँग हुँदा सम्म तिमि जहिल्यै दोस्रो हुनेछौं । जहिले पनि तिमी उनको छायाँ पर्नेछौ भन्ने सल्लाह यसअघि नै दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
यदि नेयमार पिएसजी पुगे पनि उनी सबैभन्दा ठूलो नाम हुनेछन् । मेस्सीको छायाँमा परेका उनी पिएसजीमा एन्जल डी मारिया र एडिन्सन काभानीको बीचमा भने ठूलो नाम नै हुने विश्वास गरिएको छ । अघिल्लो दिनमा पिएसजी नेयमारका लागि २ सय २२ मिलियन पाउन्ड सरुवा रकम तीर्न पनि तयार रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।